ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတာကြောင့် အရမ်းခံစားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကို ပရိသတ်ကြီး သိအောင်ပြောပြလိုက်တဲ့ မေမီကိုကို – Cele Posts
ပရိတ်သတ်တွေချစ်ကြတဲ့ MRTV-4 ရဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချော မေမီကိုကို ကတော့လက်ရှိမှာ Covid 19 ရောဂါကူးစက် ခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်..။ရောဂါ ကူးစက်ခံရ တာကြောင့် နေမကောင်းဖြစ်နေတာ (၁၀)ရက်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ဂရုစိုက်နေထိုင်စားသောက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်..။အဖျားဝင်ပြီး (၅ )ရက်လောက် အစားမဝင်ခဲ့ပေမယ့်အနံ့စပျောက်တဲ့ နေ့ကတည်းကကြိတ်မှိတ် စားသောက်နေပြီး ရောဂါကိုအလူးအလဲခံစားရတဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံေ တွကို ဝေမျှပြောပြလာပါတယ်..။
အရင်က ဝိတ်ထိန်းတဲ့အနေနဲ့ ငါးပိရည်နဲ့ မစားပါဘူး ခုဆိုငါးပိရည် တစ်မျိုးတည်းနဲ့ ထမင်း ကိုတွယ်ပါတယ်… အစားလွန်ပြီး အိ အိအအတွေ အော်ရတဲ့အ ထိ စားမိပါတယ်😅…. အခန်း ထဲပိ တ်ပြီးနေပါတယ်… လေဖြတ်ထား တဲ့အဖေ့ကို ကူးမှာစိုးလို့….အိပ်တာကလ ည်း တရားလွန်အိပ် ပစ်တယ်…. တချက်တချ က်ကျရင် အသက်ရှု မရတော့လို့ လန့်ပြီး ငိုတယ်….ချောင်းတခါ ဆိုးရင် မေတ္တာပို့ပို့ပြီး အော်ငိုရတာ လည်းအမော(ငါလေ သေလည်း မသေနိုင်ေ သးဘူး သေရင်လည်း သေ လိုက်တော့) ဆိုပြီး🤭 …
ကိုဗဈကူးစကျခံရတာကွောငျ့ အရမျးခံစားခဲ့ရတဲ့ အကွောငျးကို ပရိသတျကွီး သိအောငျပွောပွလိုကျတဲ့ မမေီကိုကို
ပရိတျသတျတှခေဈြကွတဲ့ MRTV-4 ရဲ့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြော မမေီကိုကို ကတော့လကျရှိမှာ Covid 19 ရောဂါကူးစကျ ခံစားနရေတယျလို့သိရပါတယျ..။ရောဂါ ကူးစကျခံရ တာကွောငျ့ နမေကောငျးဖွဈနတော (၁၀)ရကျကြျောကွာမွငျ့ခဲ့ပွီဖွဈပွီး လကျရှိမှာတော့ဂရုစိုကျနထေိုငျစားသောကျနရေတာဖွဈပါတယျ..။အဖြားဝငျပွီး (၅ )ရကျလောကျ အစားမဝငျခဲ့ပမေယျ့အနံ့စပြောကျတဲ့ နကေ့တညျးကကွိတျမှိတျ စားသောကျနပွေီး ရောဂါကိုအလူးအလဲခံစားရတဲ့ အကွောငျးတှနေဲ့ ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ အတှအေ့ကွုံေ တှကို ဝမြှေပွောပွလာပါတယျ..။
အရငျက ဝိတျထိနျးတဲ့အနနေဲ့ ငါးပိရညျနဲ့ မစားပါဘူး ခုဆိုငါးပိရညျ တဈမြိုးတညျးနဲ့ ထမငျး ကိုတှယျပါတယျ… အစားလှနျပွီး အိ အိအအတှေ အျောရတဲ့အ ထိ စားမိပါတယျ😅…. အခနျး ထဲပိ တျပွီးနပေါတယျ… လဖွေတျထား တဲ့အဖကေို့ ကူးမှာစိုးလို့….အိပျတာကလ ညျး တရားလှနျအိပျ ပဈတယျ…. တခကျြတခြ ကျကရြငျ အသကျရှု မရတော့လို့ လနျ့ပွီး ငိုတယျ….ခြောငျးတခါ ဆိုးရငျ မတ်ေတာပို့ပို့ပွီး အျောငိုရတာ လညျးအမော(ငါလေ သလေညျး မသနေိုငျေ သးဘူး သရေငျလညျး သေ လိုကျတော့) ဆိုပွီး🤭 …